महोत्तरी : सिमानाकामा सञ्चालित मदिरा पसल बन्द गर्न निर्देशन – The Public Today
महोत्तरी : सिमानाकामा सञ्चालित मदिरा पसल बन्द गर्न निर्देशन
विजय कुमार सिंह साउन ३०, २०७६ १०:२० pm
गौशाला, साउन ३० गते । नेपाल–भारतको सिमाना भन्दा पाँच सय मिटर भित्र रहेका सबै मदिरा पसलहरु बन्द गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारी निर्देशन दिएका छन् ।
बुधबार महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका–३ मा रहेको रघुनाथपुर प्रहरी चौकी प्राङ्गणमा राजदेवी मन्दिरको शिलान्यास कार्यक्रममा सो निर्देशन दिएका हुन् । मन्दिर शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रहरी उपरीक्षक अधिकारीले मन्दिर दशै अगावै बनाउन गर्नु पर्ने सम्पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनले मन्दिर बनाउने काम राम्रो भएको र मन्दिरमा जनताहरु आएर झुठो बोल्न पनि डराउने बताए ।
‘यो मन्दिर (राजदेवी मातालाई) साक्षी राखेर सबैले ईमान्दारीताको साथ काम गर्नुपर्छ, मरेर गएपछि कसैले धन सम्पत्ति लादैन । त्यहीँ भएर मन्दिर र धर्मलाई साक्षी राखेर कार्य गरौ’ उपरीक्षक अधिकारीले बताए । उनले भने, पुलिसहरुलाई समेत सचेत गराउछु, सामुदायसँग मिलेर काम गर्नुस् । गरेन भन्ने कारवाही गर्छाैं । त्यही भएर पुलिसलाई जति खेर पनि सचेत गराउँछु । सामुदायसँग मिलेर काम गर्नुस् ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रहरी उपरीक्षक अधिकारीले जनप्रतिनिधि र नेताहरुलाई अपराधी बताउने काम नगर्न आग्रह गरे । उनले भने, जनप्रतिनिधि वा नेताहरुको मान्छे परेपछि बचाउनलाई यो अपराधी हैन यो निर्दाेष हो भनेर संज्ञा दिन्छन् । विपक्षी मान्छे परेपछि अपराधी हो भन्छ । त्यही भएर अपराधीहरुको मनोबल बढाउने काम नगरौं ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सोनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष राज कुमार यादवले अपराधी कुनै जात र सामुदाय हैन । जो कोही पनि हुनसक्छ । अपराधीलाई बचाउने काम नगर्न आग्रह गरे । मन्दिर स्थानीय समाजसेवी लालबाबु यादवको सहयोगमा निर्माण भईरहेको छ ।
सोनमा गाउँपालिका वडा नं. ३ का वडाअध्यक्ष पुलिन्द्र कुमार यादवको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जि.प्र.का. महोत्तरीका प्रहरी निरिक्षक नविन कुमार सिंह, ईलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाका प्रहरी निरिक्षक किशोर आचार्य, सशस्त्र प्रहरी वेश खैरबनीका प्रहरी निरीक्षक प्रेम तामाङ, ईलाका प्रहरी कार्यालय रामगोपालपुरका प्रमुख, प्रहरी चौकी सम्सीका प्रमुख, प्रहरी चौकी खैरबनीका प्रमुख, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, राजनीतिकर्मी लगायत सर्वसाधारणहरुको उपस्थितिमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । यो समाचार आजको ‘द पब्लिक टुडे’ दैनिकमा छ ।